FRENCHIE PUG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Frenchie Pug Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Faransiiska Bulldog / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
Burcadda jiilka labaad Frenchie Pug oo 6 bilood jir ah— 'Aad buu u caqli badan yahay, jaalle yahay, si fudud ayuu u tababbaray, wuxuu leeyahay shakhsiyadda jilicsan ee Bulldog Faransiiska, iyo shakhsiyadda la jecel yahay ee Pug. Xaqiiqdii wuxuu leeyahay midabaynta Frenchie, calaamadaha iyo dhegaha 'fiidmeerta', laakiin wuxuu ku guuleystay inuu helo madaxa yar ee Pug, jirka iyo dabo dheer (laakiin ma uusan duuduubin !!). Xaqiiqdii waa caan caan ka ah San Francisco iyo Alamo Square Park. '
Frenchie Pug ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bulldog Faransiis iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Frenchie Pug
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Frenchie Pug
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Frenchie Pug (Frug)
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Frenchie Pug
Banx the black Frenchie Pug (French Bulldog / Pug mix) sida eey yar oo 8 bilood jir ah kursigiisa gaariga eeyga— 'Banx waa nin aad u jecel oo bulsheed. Wuxuu ku raaxeeyaa taariikhaha uu la ciyaaro saaxiibkiis ugu fiican Sanjabiil oo ah Corgi . Waxay ciyaaraan saacado iyagoo ceyrsanaya jihada dagaalka iyo legdanka. Banx waa koolkoolin, oo wuxuu jecel yahay inuu agtayda joogo. Waa maxay hadiyad, duco run ah. xoxo '
Ottis waa britlele Frenchie Pug qiyaastii 10 bilood jir— `` Waa eey cajiib ah oo jecel. Wuxuu ii ahaa hadiyaddii dhalashadayda iigu fiicnayd. Wuxuu sidoo kale u maleynayaa inuu yahay eey waardiye ah, laakiin si dhakhso leh ayuu ula kulmaa martida xitaa wuu dhunkanayaa dhunkasho haddii uu awoodo. 5
adhijirka Jarmalka adhijirka adhijirro isku dhafan
Nala biraha Frenchie Pug (Iskudarka Faransiiska Bulugog / Pug)
'Ziggy, our Frenchie Pug at 9 bilood jir wuxuu leeyahay dabeecad wanaagsan oo wuxuu la macaamilaa qof kasta oo uu la kulmo. Wuxuu jecel yahay inuu tago isbadal oo u ordaya sidii nin duurjoog ah oo eey kale la wataan beerta dhexdeeda, laakiin waxyaabaha uu jecel yahay inuu sameeyo ayaa ah cunista iyo seexashada. Markuu dhaafo, si aad ah ayuu u khuuraa, mana jirto qof hurdada ka kicinaya.
Diiwaangeli britlele Frenchie Pug at 1 sano jir ah— Iyadu waa waxa ugu macaan abid, waxay rabtaa jacaylkayga iyo u fiirsashadayda, haddana si edeb leh ayey u sameysaa. Iyadu waa qof aad u daacad ah, oo wax dhib ah oo gardarro ah kuma hayso iyada. Aad eey dheellitiran . Aad ayaan u xariifsanahay.
culeyska cirka galbeed galbeed
Diiwaangeli barta 'Frenchie Pug' markay tahay 1 sano jir
Reggie britlele Frenchie Pug at 1 sano jir ah oo la seexata iyada bisad saaxiib.
Keagan biraha Frenchie Pug ee 8 bilood jir — hooyadiis waxay ahayd Pug, aabihiis wuxuu ahaa Bulldog Faransiis ah.
Burcad jiilka labaad ee cadaan iyo madow Frenchie Pug eey ah oo 4 bilood jir ah
Burcad jiilka labaad ee cadaan iyo madow Frenchie Pug eey ah oo 6 bilood jir ah oo sariirta jiifa.
Liistada eeyaha Bulldog-ga ee loo yaqaan 'French Bulldog Mix'
adhijiraha australia cocker spaniel oo isku qasan eeyo yaryar oo iib ah
aussie bulldog eyda iibka ah
akita jarmal adhijir isku dhafan eey
sawirka tebetan terrier